Ubani ose-zoo yokugoma? | Scrolla Izindaba
Ubani ose-zoo yokugoma?
Njengoba izwekazi liqala uhlelo olukhulu kunawo wonke lokutholwa kwabantu emlandweni, izingxoxo ezizungeze ukugonywa kwe-Covid-19 kungenzeka zilawule izingxoxo zomphakathi ngekusasa elibonakalayo.
Okwamanje kunemithi yokugoma eminingana evunywe yimigwamanda yezokwelapha emhlabeni wonke inqwaba yeminye isathuthuka.
Kodwa-ke, i-Pfizer noma i-BioNTech, i-AstraZeneca ne-Moderna yizona ezintathu zokuqala ezizokhishwa ngobuningi.
Umuthi wokugoma kaJohnson & Johnson awukakasatshalaliswa kodwa kulindeleke ukuthi utholakale ezimakethe zomhlaba wonke ngoNhlolanja.
Izindaba zale mithi yokugoma zingena emkhakheni womphakathi okokuqala ngqa. Ngokusakazwa njalo kwezindaba ezibucayi eziqubukayo kube nesikhathi esincane sokubuza ukuthi zisho ukuthini emphakathini nokuthi iqhathaniswa kanjani omunye kunomunye.
Umuthi wokugoma ngamunye wehluka kakhulu ngentengo, futhi ngamunye kufanele ugcinwe futhi uhanjiswe ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene.
Isibonelo, imithi yokugoma i-AstraZeneca ne-Johnson & Johnson ingagcinwa ezingeni lokushisa eliphakeme kakhulu kunomuthi wokugoma owenziwe yi-Pfizer / i-BioNTech noma i-Moderna. Ngakho-ke lokhu kuzobiza kancane ukuthutha nokugcina.
Umuthi wokugoma ngamunye futhi unesilinganiso sokusebenza, okuyisilinganiso sokusebenza kokwelashwa ngaphansi kwezimo ezinhle nezilawulwayo zesilingo.
Uhulumeni waseNingizimu Afrika umemezele ngoLwesine ukuthi uthole imithamo eyizigidi eziyi-1.5 yomuthi wokugoma i-AstraZeneca ozokhishwa kulo kuwo wonke uMasingana noNhlolanja.
● Izinga lokusebenza libikwa ukuthi liyi-90%
● Umuthi wokugoma kufanele unikezwe ngemithamo emibili
● Kubikwa ukuthi umthamo ngamunye ubiza u- $ 3
● Umuthi wokugoma ungagcinwa ezingeni lokushisa eliphakathi kuka-2c no-8c
I-Pfizer / i-BioNTech
● Izinga lokusebenza kahle libikwa yinkampani ukuthi liyi-95%
● Umuthi wokugoma kufanele unikezwe ngemithamo emibili, amasonto amathathu ahlukene
● Kubikwa ukuthi umthamo ngamunye ubiza u- $ 20
● Umuthi wokugoma kufanele ugcinwe ezingeni lokushisa elingu-70c
● Izinga lokusebenza libikwa ukuthi liyi-94.5%
● Kubikwa ukuthi umthamo ngamunye ubiza u- $ 30
● Umuthi wokugoma kufanele ugcinwe ezingeni lokushisa elingu-20c
U-Johnson & Johnson
● Izinga lokusebenza alikakashicilelwa
● Umuthi wokugoma njengamanje usadonswa ukuze usetshenziswe njengomthamo owodwa
● Kubikwa ukuthi umthamo ngamunye ubiza u- $ 10
● Lo muthi wokugoma ungagcinwa ezingeni lokushisa eliphakathi kuka-2c no-8c, ngokufana nomuthi wokugoma i-AstraZeneca